iPhoto Kalinda: Olee ka Photo Kalinda na iPhoto on Mac
Olee otú Mee Photo Kalinda na iPhoto na Mac
1 iPhoto Introuduction
1.1 iPhoto Update History
2 iPhoto Tutorial
2.1 iPhoto Guide
2.2 iPhone ka iPhoto
Ma gụọ 2.3 iPhoto ngosi mmịfe
2.4 iPhoto collage
2.5 iPhoto Kaadị
2.6 iPhoto Kalinda
2.7 iPhoto ka DVD
3 iPhoto Atụmatụ
3.1 Best iPhoto Atụmatụ Aghụghọ
3.2 iPhoto Wepụ Duplicates
3.3 Paghaa iPhoto Library
3.4 iPhoto Recovery
3.5 iPhoto ndabere
3.6 iPhoto ka iPad
3.7 iPhoto ka iPhone
4 iPhoto Alternative
4.1 iPhoto maka Windows
4.2 iPhoto Alternatives
5 iPhoto Plugins
5.1 iPhoto Plugins
5.2 iPhoto Library Manager
5.3 iPhoto ka Facebook
5.4 iPhoto ka Picasa
6 iPhoto Nchọpụta nsogbu
6.1 iPhoto Nchọpụta nsogbu
iPhoto abịa na ọ bụla Mac kọmputa ebe 2002, dị ka akụkụ nke iLife ngwa Suite. Ọ nwere ike na mbubata, hazie, dezie, na-ebipụta ma na-eso gị dijitalụ photos na ala. Taa, anyị ga-egosi gị otú ị na-eme ka a foto kalenda na iPhoto na-enweta ya ozugbo napụtara n'ụlọ gị.
Part 1: Olee ka Kalinda na iPhoto
Part 2: More Photo Kalinda Software maka Mac
Ọ bụ ezie na iPhoto nwere ike ghara ịbụ ndị kasị mma kalenda software maka Mac, ọ bụ ndị kacha otu m na uche, ma ọ bụ free. Jụụ, ziri ezi. -Ahụ ugbu a n'okpuru banyere esi mee ka a foto kalenda na iPhoto.
Nzọụkwụ 1. Họrọ Photos na Họrọ Kalinda Theme
Ẹkedori iPhoto na-ahọrọ foto ị chọrọ tinye gị na kalenda. Wee pịa Kalinda bọtịnụ na nri ala akuku nke iPhoto toolbar. Na mmapụta menu, ọtụtụ nke kalenda ndebiri na-gụnyere. Họrọ ọkacha mmasị gị otu.
Rịba ama na ịpị "Nhọrọ + Ahịa" button ga-emeghe iPhoto Bipute Ngwaahịa ibe weebụ, nke ga-egosi na ị na kalenda nkọwa na ịnye ọnụahịa ọmụma.
Nzọụkwụ 2. Mepụta iPhoto Kalinda
Nke mbụ niile, setịpụrụ kalenda n'ụzọ ziri ezi. Ị nwere ike họrọ ọnwa na mba maka kwesịrị ekwesị ememe akara. Ọ bụrụ na ị na-eji iCal, ị nwekwara ike mbubata gị niile dị mkpa anniversaries na ụbọchị ọmụmụ ka ha biri ebi na kalenda.
Pịa OK na a ọhụrụ window ga-gbapụta. Mgbe ahụ ị pụrụ tinye foto gị, ịgbanwe captions na akpaaka ndokwa photos site na ịpị "Autoflow button".
Nzọụkwụ 3. Buy iPhoto Kalinda
Mgbe ị na-nwere afọ ojuju na gị iPhoto kalenda, see Buy Kalinda button (ọ bụ na ala) ebe na gị iji na gị iPhoto kalenda napụtara ozugbo gị mgbe 2-3 izu.
Ị nwere ike ịga Apple si website maka ozi ndị ọzọ banyere iPhoto Kalinda, ihe ọ bụla ọ bụ banyere iPhoto kalenda Ndinam ma ọ bụ nnyefe.
E wezụga iPhoto, ndị ọzọ foto kalenda software maka Mac nwekwara ike inyere gị aka ọrụ ahụ. Na akụkụ a, anyị ga-ịme ka ị ụfọdụ ndị kasị mma foto kalenda-eme ka na ahịa.
# 1. Wondershare iCollage for Mac
Ahịa: $ 29
Wondershare iCollage for Mac Bụkwa foto kalenda software maka Mac, nke na-agụnye ihe tupu e foto akwụkwọ ndebiri, ekele kaadị ndebiri, kalenda ndebiri karịa iPhoto. Ọ na-ekwe ka ị na-ebipụta na kalenda onwe gị na onye na-ebi, kama zuo online. Otú a, ị pụrụ ịzọpụta oge na ego. Ebe i nwere ike ibudata ya:
# 2. PrintMaster Platinum
PrintMaster Platinum abịa na 577 kalenda ndebiri nke na-enyere gị aka mfe ike a dijitalụ kalenda. I nwekwara ike mbubata gị onwe gị ihe oyiyi ma ọ bụ họrọ si dị iche iche ihe oyiyi nke na-abịa na ndị software.
# 3. Bipute Gbawara
Bipute Gbawara awade ọtụtụ puku ndịna-emeputa na ọtụtụ narị Akara ókwú na mgbakwunye na niile ndebiri. The mfe ikpuru-n-dobe mma na-eme na software mfe n'ihi na onye ọ bụla na-eme ka ha onwe ha dijitalụ kalenda.
Olee otú Mepụta 3D Carousel Flash Gallery na Music
Nweta Best Video edezi Software maka Beginners
Olee otú Mee a Wedding Montage na Photo na Video
Facebook Nchọpụta nsogbu
Ngosi mmịfe mmetụta: Transition, ederede na Special mmetụta
Top 3 Best Photo Editor maka Blackberry
Mbedo Akụkọ: Mee ka a Photo ngosi mmịfe ka Gwa Your mbedo Akụkọ
Agbamakwụkwọ ịsa ịkpọ òkù - Mee Pụrụ iche Agbamakwụkwọ ịsa Òkù kaadị
Wedding Album: Olee ka Custom Digital Wedding Album
Zọpụta Ụbọchị Kaadị: Olee ka a Pụrụ iche Zọpụta Ụbọchị Kaadị
Wedding Òkù Kaadị - Olee otú iji diy a Pụrụ iche Wedding Òkù Kaadị
Na-azụ The Old Facebook Profaịlụ - Gbanyụọ Facebook usoro iheomume?
Mee ka a Baby Kalinda akara Mkpa AFỌ
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee Photo Kalinda na iPhoto na Mac